Waxtarka boodhka maaskarada ee maaskaradu waxay kuxirantahay wax qabadkiisa xakamaynta boodhka, gaar ahaan boodhka la jecel yahay ee ka hooseeya 2.5 microns. Sababtoo ah cabirka qashinkan ee boodhku wuxuu toos u geli karaa alveoli, caafimaadka aadanaha ayaa sababay saameynta ugu weyn. Neefyada hawada wasakhda ah, oo ka samaysan dareeraha kaarboon kaarboon firfircoon ama dharka aan la goynin, waxay dhex maraan walxaha boodhka ka wanaagsan ee ka yar 2.5 microns.
Mashiinka qulqulaya maaskarada mashiinka ayaa ah in laga hortago hawada iyada oo la adeegsanayo maaskaro iyo farqiga wajiga aadanaha iyada oo aan lagu nuugin baahiyaha farsamo ee filterka. Hawada, sida biyaha, ayaa ku qulqulaya meesha ay yar tahay caabbinta. Marka qaabka maaskaro uusan u dhowaan wejiga, waxyaabaha khatarta ku jira hawada ayaa ku dhici doona marinka neefsashada qofka. Marka, xitaa haddii aad doorato maaskaro filter ugu fiican. Ma ilaalinayso caafimaadkaaga. Shuruudo badan oo shisheeye iyo heerar ayaa bixiya in shaqaaluhu ay si joogto ah u tijaabiyaan adkaynta maaskaro. Ujeeddada ayaa ah in la hubiyo in shaqaaluhu doortaan maaskaro ku habboon oo xirtaan iyaga oo raacaya nidaamka saxda ah.